ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ….မင်းတစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ်ပါ …။ (၁) အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ …။
အင်မတန် ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမျက်နှာဘုရား တည်ရှိရာ နေရာ
ပိုင်အိုနီးယားပိုင်ရှင် ဦးဇော်မိုး ပြောပြထားတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်း (၅) ချက်
TIK TOK မှာ ဆင်ဆာထိပြီး ရက်အကန့်အသတ်နဲ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိုပေါက်
ဒါတွေကို တကယ်လုပ်ပါ….မင်းတစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရဘူး
တကယ်ချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေ တကယ်လုပ်ပါ …။ (၁) အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွတဲ့ အလုပ်မရွေးပါနဲ့ …။ (၂) ချွေတာစုဆောင်း သူဌေးလောင်းတဲ့ ရသမျှကို အကုန်မသုံးပါနဲ့ စုနိုင်သမျှ စုပါ …။ (၃) အချိန်ဟူသည် အဖိုးတန်ဆုံးသော အရင်းအနှီးတဲ့ အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့ ။ အကြိုးရှိစွာ အသုံးချပါ …။ (၄) ကျမ်းမာခြင်းသည်
စေတနာကို စော်ကားသွားကြတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ Q ဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်
စေတနာကို စော်ကားသွားကြတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ Q ဝင်တဲ့သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် စေတနာကို စော်ကားသွားသူများ Quarantine ၀င်တဲ့သူတွေကို အား/ကာ သိပ္ပံ(မန္တလေး) ကျောင်း အမျိုးသား အိပ်ဆောင်တွေမှာထားတယ်။ တစ်ဆောင်ချင်းစီက အိပ်ဆောင်မှုး(နည်းပြ)၊ နေတဲ့ အခန်းတွေကို သော့တွေဖျက်တယ်။ luggage အိတ်တွေကိုဖွင့် စာရွက်စာတမ်းတွေမွှေ၊ အကျီ င်္ဖိနပ်အကုန်ယူတယ်၊ ဂစ်တာတွေရိုက်ချိုးသွားတယ်။ စည်းမရှိကမ်းမရှိနဲ့ အကုန်လုပ်သွားကြတယ်။
ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းများ နှင့်ထူးခြားသောဗိသုကာလက်ရာ များဖြင့် တည်ထားသောတောင်ထိပ်‌ပေါ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သာမန်ထက်ပိုပြီး တရားအားထုတ် ဖို့အတွက် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက် Tambon Khaem Son ဒေသ အလယ်ပိုင်းတွင်ရှိသော Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန် သည်ဘုန်းတော်ကြီးများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်သူများ အတွက်ဓမ္မ ဆိတ်ငြိမ်ရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဟောပြောရန်အတွက် ခန်းမ ၊
(၁) မိဘတွေစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းရင်ဆင်းရဲမယ် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမပါပြောရရင်…မိဘတိုင်း၊ မိဘတိုင်းဟာ အိမ်တစ်အိမ်စီးပွားဖြစ်မဖြစ်ချမ်းသာမသာ အရေးကြီးဆုံးသောလုပ်ဆောင်သူတွေပါ။မွေးကတည်းကစလို့မိဘအုပ်ထိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး(လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပျံသန်းခင်)အချိန်ထိ မိဘတွေကရှာဖွေကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးလာတာ၊အရွယ်ရောက်သည်လို့ကိုယ့်လမ်းကိုကိုယ်လျောက်နိုင်တဲ့အချိန်ထိ မိဘတွေကပဲကျွေးမွေးလာတာ။ဒီနေရာမှာမိဘတွေစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းရင်သားသမီးတွေအနေအစားဆင်းရဲမယ်၊အနာဂါတ်မရေရာဘူး။ ဒီနေရာမှာ ဦးဘုန်း(ဓာတု)က သူ့မိဘတွေနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီး ဥပမာပေးတယ်ဗျ။သူတို့ဆင်းရဲခဲ့ရတာဟာ သူ့မိဘတွေ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းလို့ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်တဲ့။(မန့်တွေထဲမှာ ဝိုင်းဆဲလိုက်ကြတာ၊ မိဘကိုတောင် အပစ်ဖို့တဲ့သားသမီး၊ဒီအရွယ်ထိရောက်အောင်ကျွေးမွေးလာတာ၊ အခုလိုဟောပြောနိုင်အောင်မိဘတွေကပဲပျိုးထောင်ပေးလာတာ ဘာညာသာတကာ ပေါ့ ဝိုင်းဆဲနေကြတာ)ဒါပေမယ့် ဆရာ က မိဘကိုအပစ်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူး။စီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာညံ့ဖျင်းလို့ဆိုတာပါတယ်။အဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်တို့အတုယူရမယ်၊ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်။ သူက သူ့မိဘတွေက ဝန်ထမ်း အဖေက
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ကတော့ လက်ရှိမှာ ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို ရပ်နားထားရပြီး အိမ်မှာပဲ အကျိုးရှိမယ့်အရာလေးတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက်က သူဝါသနာပါရာလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နေသလို ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေဖို့ အခွီဗီဒီယို Tik Tok လေးတွေကို ရိုက်ကူးနေလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါက်ကတော့ Tik Tok မှာပါ
စမ်းချောင်းမြို့နယ် နန္နာဝန်လမ်းအိမ်အမှတ် (၂၈) (၄)ထပ်တိုက်ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွား (ရုပ်သံ)
၃၀.၅.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၂၀ ၅၅)အချိန်ခန့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ နန္နာဝန်လမ်းအိမ်အမှတ် (၂၈) (၄)ထပ်တိုက်ပြိုကျမှု ဖြစ်ပွားသဖြင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးယာဉ်(၁)စီး ရောက်ရှိ ၍ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ကနဦးသတင်းအရ လူ ထိခိုက်မှုမကြားသိရသေးပါ။ Unicode Version ၃၀.၅.၂၀၂၀ ရကျနေ့၊ (၂၀ ၅၅)အခြိနျခနျ့ စမျးခြောငျးမွို့နယျ၊ စမျးခြောငျးတောငျရပျကှကျ၊ နန်နာဝနျလမျးအိမျအမှတျ (၂၈) (၄)ထပျတိုကျပွိုကမြှု
စည်သူပလပ်ကျွတ်ကို ဆန် ၆ ပြည်အိတ်လေးလက်ဆောင်ပေးရင်း ဖိနပ်၅ရံဝယ်ယူအားပေးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခင်လှိုင်ကတော့ ကျရာနေရာမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုလည်း အပြည့်အဝရယူထားနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်ရယ်မောအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်ကတော့ အေးချမ်းသာယာတဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ကတော့ ယခုမှာ စည်သူပလပ်ကျွတ်ကို ဆန် ၆ ပြည်အိတ်လေးလက်ဆောင်ပေးရင်း ဖိနပ်၅ရံဝယ်ပြီး အားပေးခဲ့ပါတယ်။ခင်လှိုင်ကတော့ ” လေးစားပါတယ်…ချစ်ညီလေးစည်သူ..မိသားစုတစ်ခုကိုဦးဆောင်နေရတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းပီသပါတယ်
ဘူတာနား မှာ တယောက် တည်း အိပ်ေ န တဲ့ အမေကြီး ကို နိုးပြီး မေးမြန်းကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ….
ယခု သတင်းကို ( ONE TO ONE ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမရပူရ ပိန်းတန်း ဘူတာနားမှာတယောက်တည်း အိပ်နေ တဲ့အမေကြီးကို အကူအညီပေးဖို့ နိုးပြီးမေးမြန်းကြည့် လိုက်တော့ အမေကြီးက ကောလင်း ကနေ ရထားမှား စီး လာတာပြောလို့ပြော
CCTV တပ် ထားမှန်း မသိ ဘဲ ဆိုင်ရှင်အ လစ်မှာ စား စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ် ခု ခိုးယူနေ တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို
ယခု သတင်းသည် နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ Page မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ အခု ကိုဗစ်ကာလ မှာ အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေး မပြေလည်မှုတွေကတော့ လူအများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အထူးသဖြင့် အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အပေါ်မှာ ပိုပြီးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး.. အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ ခိုးမှု
အိမ်လာလည်တဲ့ သမီးငယ်ဆွိချိုကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စားစရာတွေပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ ဟန်ထူးလွင်
Big Bag Band ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဟန်ထူးလွင်က လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ ဟန်ထူးလွင်က ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲ ဇနီးဖြစ်သူ ဇုံဇုံနဲ့ တရားဝင်ကွာရှင်း ပြတ်ဆဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်က ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ကွာရှင်းလိုက်ပေမယ့် သမီးတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းလိုလို သမီးလေးတွေနဲ့အတူတူ အချိန်ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ဟန်ထူးလွင်က
123 … 192 Older